तपाईंको आउटबाउन्ड मार्केटि Strate रणनीति किन असफल भइरहेको छ Martech Zone
किन तपाईंको आउटबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति असफल भइरहेको छ
सोमबार, मार्च 11, 2013 सोमबार, मार्च 11, 2013 Douglas Karr
आउटबाउन्ड मार्केटि industry छूटको लागि हामीबासी मार्केटिंग उद्योगमा हामी तिनीहरू द्वारा एक प्रलोभन छ। मैले त्यहाँ पढेको पनि केही इनबाउन्ड मार्केटरहरूले भने कि आउटबाउन्ड मार्केटिंगको लागि अब आवश्यक छैन। स्पष्ट कुरा, त्यो बunk्क हो। कुनै पनि व्यवसायलाई नयाँ बजारमा विस्तार गर्न खोज्ने सम्भावित सल्लाहहरू र उनीहरूलाई राम्रा ग्राहकहरू बनाउने सम्भावनाहरूसँग कनेक्ट हुनको लागि यो डरलाग्दो सल्लाह हो।
यदि तपाईंसँग एक प्रख्यात ब्रान्ड छ (धेरै ब्लगरहरू र सोशल मिडिया एजेन्सीहरूले गरे जस्तै), फोन लिनु र जाडो कल गर्न आवश्यक पर्दैन। तपाइँको व्यवसाय बढाउन मद्दतको लागि शब्द र सन्दर्भहरू पर्याप्त हुन सक्छ। यद्यपि धेरै कम्पनीहरूले यो लक्जरी होइन। दुबै बढ्न र उदासीनताको लागि, धेरै जसो कम्पनीहरूले आउटबाउन्ड मार्केटि strategy रणनीति समावेश गर्नुपर्दछ। तैपनि, त्यहाँ धेरै तथाकथित बिक्री पेशेवरहरू छन् जुन उनीहरूलाई त्याग्नु अघि सम्भावितको अनियमित सम्पर्कहरूको सल्लाह दिन्छ।
धेरै आउटबाउन्ड मार्केटिंग रणनीतिहरू असफल हुन्छन् किनकि तिनीहरू आफ्नो कुञ्जी फर्मोग्राफिक भित्र रहेका ग्राहकहरूलाई कल गर्नमा स्थिर हुँदैनन्। जेसुबीका सह-संस्थापक ए बिक्री संभावना स्वचालन उपकरण र मार्टेकको प्रायोजक।
किन विधेयक पेशागत दृढतामा ठूलो विश्वास भए र किन जेसुबी निर्माण गरे उनीहरूको प्रारम्भिक दिनहरूमा फिर्ता जान्छ भन्ने कारणको एक अंश। एप्रिमो। बजारलाई कल गर्न निर्णय गरियो १ 12,००० पटक सम्म १० देखि १२ हप्ता अवधिमा फोनमा कुराकानी गर्नका लागि उनीहरूलाई प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै। किनभने एप्रिमोले फर्च्युन marketing०० मार्केटि teams टोलीलाई लक्षित गरिरहेको थियो उनीहरूसँग लक्षित गर्न असंख्य व्यक्तिहरू थिए।
यो फोन फोन लिन वा भ्वाइसमेल फिर्ता गर्ने सम्भावनाहरू प्राप्त गर्न पनि धेरै नै गाह्रो थियो। मेरिल लिनच उनीहरूको लक्ष्य सूचीमा थियो २१ मार्केटि names नामहरू लक्षित गर्न ... सीएमओ बाट, मार्केटिंग को VP बाट इन्टरनेट मार्केटिंग, का निर्देशक, आदि निजी ग्राहक मार्केटिंगका निर्देशक अन्तमा phone औं प्रयासमा उसको फोनले उत्तर दियो। उहाँ लक्षित १9औं व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उनले बैठकको प्रस्ताव स्वीकारे, ठोस सम्भावनामा परिणत भए र मिलियन मिलियन डलरको सम्झौता गरे। यदि तिनीहरूले attempts प्रयास पछि कल गर्न छोडे वा केवल called व्यक्तिलाई बोलाए हामी उहाँसँग कहिले पनि कुराकानी गर्दैनौं।
जेसुबीले हालसालै एउटा सम्झौता बन्द गर्‍यो जेरोक्स। बिलको रेपले week हप्ता अवधिमा १० पटक पटक बिक्रीको VP बोलाउँदछ। उनले वास्तवमा दोस्रो प्रयासमा उहाँमा पर्नुभयो :)। उसले कल गर्न जारी राख्यो र उसको १० औं प्रयासमा उनले वास्तवमा भने कि म सही व्यक्ति हुँईन कृपया कृपया बिक्रीको एसवीपी कल गर्नुहोस्। मेरो प्रतिनिधिले उसलाई बोलाए र attempt औं प्रयासमा उनले आफ्नो फोन उठाए र भने, "म कडा मान्छे हुँ कि तपाईले यो कसरी गर्नुभयो?" बिलको प्रतिनिधिले उनको प्रक्रिया र जेसुबीले कसरी मद्दत गरे भनेर वर्णन गरे। जेरोक्सले त्यहाँ एक प्रदर्शनको अनुरोध गर्‍यो र केही हप्ता पछि जेसुबीसँग user० प्रयोगकर्ता सम्झौता भयो।
माथिका कुनै पनि उदाहरणहरू इनबाउन्ड मार्केटि via मार्फत बन्द हुने थिएन किनकि सम्भावितहरूले समाधान खोजिरहेका थिएनन्। न त कोहीले भ्वाइसमेलमा जवाफ दिएका हुनेछन्। न त कोहीले सम्बन्धित कम्पनीहरुसँग व्यापार गरेको हुने स rep्केत मात्र only पटक वा contacts सम्पर्कहरुमा कल गरीन्थ्यो। शक्ति थाहा छ कि यो लगनशीलता लाग्छ र त्यो दृढता के हो जान्नु पर्छ।
जेसुबी Insightful रिपोर्टहरू र कार्यवाहीयोग्य कुराकानी ट्र्याकिंगको साथ बिक्री उत्पादकता अधिकतम गर्दछ। समय बचत गर्नुहोस् र एक क्लिक कल स्क्रीनहरू, स्वचालित फलो-अपहरू, र शक्तिशाली रिपोर्टिंग उपकरणहरूको साथ अधिक बेच्नुहोस्।
टैग: चिसो कल गर्दैसीआरएमजेसुबीमेरिल लिंचआउटबाउन्ड मार्केटिंगबिक्री स्वचालनबिक्री सीआरएमबिक्री प्रक्षेपणबिक्री प्रत्याशा स्वचालनxerox
टाइमट्रेड: लेड्सलाई तपाईंको अर्को नियुक्ति तालिका बनाउनुहोस्!
सामाजिक विज्ञापन को राज्य
मार्स 12, 2013 मा 9: 54 एएम
धन्यवाद सँधै डगको रूपमा, पहिलो आफैंले बिक्रीको लागि स्वचालित समाधान जस्तै राम्रो खोजी गर्दछ थप खोजको लागि, र दोस्रो तपाईंको पोस्टले स्टार्ट-अपहरू र हाम्रो स्थानीय समुदायको बारेमा केही राम्रो कुराकानीको कारण बनायो।
मार्स 12, 2013 मा 10: 22 एएम
घट्ने फिर्ताको एक बिन्दु छ। B2B ग्राहकहरूसँग हामीले काम गरेका छौं कि हामीले फोन र भ्वाइसमेल आउटरिचको attempts प्रयास पछि, फर्काउने वा सगाई दर नाटकीय रूपमा खस्कन्छ। दृढता सबै राम्रो छ र राम्रो छ जब सम्म तपाईं गधा मा एक कष्टकर दर्द बन्न, जो कम्पनी र ब्रान्ड को धारणा दुख्छ। अवश्य पनि त्यहाँ अपवादहरू छन् जहाँ बिक्री "कोचहरू" स्टेजमा पाइन्छन् र भित्री बिक्री प्रतिनिधिको बारेमा कुरा गर्छन् जसले attempts 8 प्रयास गरे र उनको जीवनको बिक्रीलाई विकास गरे। त्यो अपवाद हो। यदि कसैले मलाई १२ पटक कल गरे जब म प्रतिक्रिया देखाउँदिन, म उनीहरूको व्यवसायमा आणविक मिसाइल प्रक्षेपण गर्न तयार छु। सम्पर्क राख्नुहोस् र पोषण कार्यक्रममा राख्नुपर्दा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
मार्क्स 30, 2013 मा 5: 22 PM
पहिले बन्द, मलाई फोनमा कुरा गर्न मन पर्छ। किन? किनकि म यो कत्ति विरलै गर्दछु, र त्यो डिजाइन द्वारा छ। यदि म कसैसँग कुरा गर्दैछु भने, म सामान्यतया केही किन्दै वा बेचिरहेको छु। मँ लिन चाहन्छु कि मैले प्रत्येक महिना दुई दर्जन कलहरू पाउँदछु - अन्य २ देखि hundred सय (मैले भर्खरै हाम्रो VOIP प्रणाली जाँच गरें) BS हो जुन म तिरस्कार गर्दछु। यस्तो देखिन्छ कि बिक्री प्रक्षेपण स्वचालनले यो संख्या बढाउने आशा गर्दछ। आउनुहोस् स्पष्ट छ - त्यो रेखाको अर्को छेउमा चपका लागि राम्रोसँग कोड दिन गइरहेको छैन। किन? किनकि म विश्वास गर्दिन कि कसैले मलाई समाधानको साथ बोलाउनेछ जुन मैले पहिल्यै हेरिसकेका छैनौं - र यदि यो मूल्य हो भने मैले पहिले नै उनीहरूलाई भेटिसकें। यो बन्द दिमागमा, आत्मविश्वासको दृष्टिकोणले मेरो क्रेता व्यक्तित्वका केही विशेषताहरू बनाउँदछ - म प्रारम्भिक धर्मपुत्री हुँ जसले मूल्य खरीद गर्दछ र डिजिटल च्यानलहरू मन पर्छ - सामाजिक पनि - अनुसन्धान गर्न र समाधान सेट निर्माण गर्न जुन मेरो व्यापारलाई ड्राइभ गर्छ। ।
त्यसोभए, कुराको तात्पर्य यो हो कि कुनै पनि प्रणालीले मलाई कति पटक बोलाउँदछ, यो मेरो मनपर्ने च्यानल होईन - र यसले स्पष्टसँग काम गर्दैन, मानिसहरूले प्रयास गरे। यसको मतलब यो अरूको लागि काम गर्ने छैन, यदि माथिका उदाहरणहरूले देखाउँदछ कि यसले हुनेछ भने - तथापि मलाई लाग्छ कि यसले यो पनि प्रदर्शन गर्दछ कि एक क्रेता व्यक्तित्व व्यायाम भनेको फनेल विभाजन व्यायामको एक साँचो शीर्ष हो जुन सबै विपणकहरूले लाभ उठाउन सक्दछन्। एउटा स्ट्रोकले प्रत्येक लोकको लागि काम गर्दैन - र यो काम शीर्षक, कम्पनी आकार वा खरीद किन्ने भूमिका द्वारा निर्धारण हुँदैन - यो व्यक्तित्वमा निर्भर गर्दछ। समाधान विपणन स्वचालन हो, वा बिक्री सम्भावना स्वचालन जहाँ तपाईं कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जान्नको लागि विकल्प छैन। र एकचोटि तपाईंले फोनमा तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नुभयो, कुराकानी यसको लागि सबै भन्दा धनी हुनेछ।